Steeti Bayelsa nke Naịjirịa tụgharịrị ngalaba ndị njem iji bulite ego ga-abata
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Steeti Bayelsa nke Naịjirịa tụgharịrị ngalaba ndị njem iji bulite ego ga-abata
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Kọmishọna maka Omenala na njem nlegharị anya nke Bayelsa Steeti, Dọkịnta Iti Orugbani
Kọmishọna maka Omenala na njem nlegharị anya nke Bayelsa Steeti, Dọkịnta Iti Orugbani, ekwusiwo ike na njem nleta nwere ike ịkwalite ego a na-enweta n’ime obodo (IGR) nke steeti yana mepụta ohere ọrụ, ma nwee ike ịbụ otu n’ime ogidi ndị dị mkpa. nke a nwere ike ịdabere na mmaliteghachi akụ na ụba nke steeti.
N'ikwupụta na gọọmentị dị njikere imegharị akụrụngwa na mpaghara ndị njem nlegharị anya na steeti niile ma weghachite ụlọ ọrụ nnabata ndị ọbịa site na mmejuputa atumatu mmepe njem nlegharị anya nke ga-eme ka ọdịnala ọdịbendị, nka na njem njem dị na steeti ahụ nwee ike ime ka ngalaba ahụ nwee ike zuru oke ma rụọ ọrụ dị oke mkpa na atụmatụ mmekọrịta mmekọrịta obodo na ọdịbendị nke steeti.
Dr Orugbani, na-eme ka a mara na Yenagoa na Mọnde mgbe ọ na-aga njem nleta na njem nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị n'okpuru ozi ahụ, kwuru na gọọmentị dị njikere ịhazigharị mpaghara ahụ site na ịkwado na ime atụmatụ kwesịrị ekwesị iji nweta nsonaazụ ndị a tụrụ anya ma weta ndị njem mba na mba. na steeti.
O kwuru na ụlọ ọrụ ndị njem na-enwe ike ịgbanwe echiche na nghọta nke Bayelsa Steeti site na steeti echepụtara na ọ ga-adị ize ndụ, na-emegide ma dabere na ebe dị mma, udo na ọganihu. N'ịchọpụta na mpaghara ndị njem na-arị elu na atụmanya maka mmụba n'ọdịnihu n'ọdịnihu dị ezigbo mma, dịka nke a, mịnịstrị ahụ na-enyocha atụmatụ iji bulite ngalaba ahụ ruo na ikike ya zuru ezu iji kwado ụzọ ndị ọzọ enweta ego nke steeti.
Kọmishọna ndị njem na-ekwupụta na ịga n'ihu, Gọọmentị ga-eji echiche ọ bụla nke ọrụ, chebe akụ ọdịbendị ọdịnala, ụlọ ọrụ ile ọbịa, kwalite nka na ụlọ ọrụ okike, kwado / sonye na mmemme ọdịnala obodo na aka, kwalite ememme omenala na ihe omume gafee steeti. . Na-ekwusi ike na mịnịstrị ahụ ga-achọ mmekorita ụlọ ọrụ ọha na eze na mmekorita aka na mmepe ọsọ ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'ikwu okwu mgbe ọ nyochachara ụlọ nkwari akụ abụọ nke Star, na Swali, Dr Orugbani kwupụtara ụjọ na nnukwu ihe mkpofu ahụ. N'ịkọwa izu ohi, izu ohi na imebi ihe eji arụ ụlọ, akụrụngwa dị mkpa, akwa akwa na ihe ndozi dị ka nnukwu mbibi nye steeti n'ihi nnukwu ego eji azụta na ibupu akụrụngwa ahụ. Ọ kpọrọ oku ka emee nchọpụta nke ọma iji wee kpọbata ndị kpara arụ a.
Agbanyeghị, gọọmentị kwuru na gọọmentị ọganiihu na-ele anya n'ihu, yabụ, Gọọmentị ga-enyocha ụzọ iji mezue ọrụ a, ma kwenye na a ga-etinye usoro nchekwa kwesịrị ekwesị maka mmadụ iji gbochie izu ohi na saịtị ahụ.
Kọmịshọna ahụ rụtụrụ aka na Gọọmentị ga-emeziwanye akụrụngwa na ọdọ mmiri ahụ, mezue owuwu nke ogige mmiri ọdọ mmiri nke Oxbow maka ụmụaka, ma gbaa ndị ọrụ aka ha ume na mmepe nke ebe ntụrụndụ niile na steeti.
O kwuru na gọọmentị ọganiihu na-etinye aka na inye nkwado nke International Institute of Hospitality, Council Council for Arts and Culture iji rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma, na-agbakwunye na a ga-emezigharị udo ahụ iji kwado atụmatụ ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
N'ịkọwapụta ụfọdụ ọdịbendị ọdịbendị bara ụba na ebe ndị njem na-enye steeti, Kọmịshọn ahụ kwusiri ike na Bayelsa nwere ikike dị ukwuu nke ịbụ ebe njegharị nke mba ahụ.
N'ịbụ ndị obi ụtọ na-agba egwú site na òtù omenala obodo nke a na-eme iji kwanyere ya ùgwù, Dr Iti gosipụtara nkwenye ya maka ọdịmma ha ọbụna dị ka ọ na-emesi obi ike banyere ịlele nsogbu, nchegbu na ọchịchọ ndị e gosipụtara.
Ọ kwara arịrị banyere ọnọdụ Creek Motel ugbu a, ụlọ nkwari akụ nke steeti nwere mkpọmkpọ ebe na onyinyo nke onwe ya, na-ekwusi ike na mịnịsta ahụ nwere mmasị ma dị njikere itinye mgbalị iji weghachi ụlọ ọrụ ahụ.
Agencieslọ ọrụ na akụrụngwa gara bụ; Council of Arts and Culture, Creek Motel, Oxbow Lake, International Institute of Tourism and Hospitality, Starlọ oriri na ọ Starụ Twoụ abụọ, ihe ncheta obodo na ihe ngosi nka, Peace Park, na ndị ọzọ.
Kọmịshọna soro ndị odeakwụkwọ na-adịgide adịgide, HoDs na ndị isi nke ngalaba ọdịbendị na njem nlegharị anya nke ndị Minista na ndị ọzọ. Ndi ozo so ya bu ndi otu a maara dika Too Toro For Douye Diri, Nembe.
COVID-19 ọrịa na-efe efe na-ebelata ikike nke akwụkwọ ikike ngafe